Multilingual Bible: Nepali New Revised Version, Isaiah 10
Nepali New Revised Version, Isaiah 10
1 धिक्‍कार तिनीहरूलाई, जसले अन्‍यायी व्‍यवस्‍था बनाउँछन्‌, तिनीहरूलाई जसले अत्‍याचारी विधि निकाल्‍छन्‌।
2 गरीबहरूका हक खोस्‍न र थिचोमिचोमा परेका मेरा प्रजाहरूका न्‍याय नगर्न, विधवाहरूलाई शिकार बनाउन र टुहुरा-टुहुरीहरूका धन लुट्‌नलाई तिनीहरूले यसो गर्छन्‌।
3 लेखा दिनुपर्ने दिन र टाढ़ाबाट आउने आपत्ति आउँदा तिमीहरू के गर्नेछौ? तिमीहरू सहायताको निम्‍ति कसकहाँ जानेछौ? तिमीहरू आफ्‍ना धनहरू कहाँ छोड्‌नेछौ?
4 कैदीहरूका साथसाथै खुम्‍चिनु र मारिएकाहरूका माझमा लोट्‌नुबाहेक अरू केही रहनेछैन। यतिमा पनि उहाँको रीस मरेको छैन, र उहाँको हात अझै माथि उठाइएकै छ।
5 “धिक्‍कार अश्‍शूरीलाई, मेरो रीसको लाठो, जसको हातमा मेरो क्रोधको लौरो छ!
6 लूटको माल खोस्‍न र लूटपीट गरी ध्‍वस्‍त गर्न र सड़कहरूको हिलोझैँ कुल्‍चीमिल्‍ची गर्नलाई ईश्‍वर नमान्‍ने जाति तथा मलाई रीस उठाउने मानिसहरूको विरुद्धमा मैले त्‍यसलाई हतपतसाथ पठाएको छु।
7 तर त्‍यसको यस्‍तो इच्‍छा छैन। त्‍यसको मनमा यस्‍तो विचार छैन। तर त्‍यसको अभिप्राय त सर्वनाश गर्ने, र धेरै जातिहरूलाई खतम गरिदिने विचार छ।
8 त्‍यसले भन्‍छ, ‘के मेरा सेनापतिहरू सबै राजा होइनन्‌ र?
9 के कल्‍नोले कर्कमीशजस्‍तै भोगेन र? के हमात अर्पादजस्‍तै र सामरिया दमस्‍कसजस्‍तै छैन र?
10 जसरी मेरो हातले मूर्तिहरूका राज्‍यहरूलाई कब्‍जा गर्‍यो, जसको खोपेर बनाएका मूर्तिहरू यरूशलेम र सामरियाका मूर्तिहरूभन्‍दा धेरै थिए,
11 त के मैले सामरिया र त्‍यसका मूर्तिहरूलाई व्‍यवहार गरेझैँ यरूशलेम र त्‍यसका मूर्तिहरूलाई व्‍यवहार नगर्ने’?”
12 जब परमप्रभुले सियोन पर्वत र यरूशलेमको विरुद्धमा आफ्‍ना सारा काम गरिसक्‍नुहुन्‍छ, तब उहाँले भन्‍नुहुनेछ, “म अश्‍शूरका राजाको हृदयको स्‍वेच्‍छाचारी अभिमान र घमण्‍डी आँखाको कारण त्‍यसलाई दण्‍ड दिनेछु।
13 किनकि त्‍यसले भन्‍छ, ‘मेरै हातको बल र मेरै बुद्धिमानीले मैले यो गरेको हुँ, किनकि मेरो समझशक्ति छ। मैले जाति-जातिको सिमाना हटाएँ, र तिनीहरूका भण्‍डारहरू लुटेको छु। एउटा पराक्रमी व्‍यक्तिझैँ मैले तिनीहरूका राजाहरूलाई दमन गरेको छु।
14 कसैले चराको गुँड़मा हात लम्‍काएझैँ मेरो हात जाति-जातिहरूका धन-सम्‍पत्तिसम्‍म पुगेको छ। छोड़िराखेका अण्‍डालाई कसैले बटुलेझैँ मैले सबै देशहरूलाई बटुलें। तर त्‍यहाँ कसैले एउटै पखेटा चलाएन अथवा चूँ-चूँ चीँ-चीँ कसैले गरेन’।”
15 के बन्‍चरोले त्‍यसलाई चलाउनेको विरुद्धमा आफूलाई उच्‍च पार्छ? अथवा के आराले त्‍यसलाई चलाउनेको विरुद्धमा आफ्‍नो बड़प्‍पन देखाउँछ? यो त लट्ठी आफैले पो त्‍यसलाई उठाउनेलाई मच्‍चाएझैँ, अथवा लौरो आफैले त्‍यसलाई उठाउने मानिस, जो काठ होइन, उसलाई मच्‍चाएझैँ हुन्‍छ!
16 यसैकारण परमप्रभु, सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुले त्‍यसका बलिया योद्धाहरूका बीचमा सोतर पार्ने रोग पठाउनुहुनेछ, र त्‍यसको गौरवमुनि दन्‍केको आगो सल्‍कनेछ।
17 इस्राएलका ज्‍योति आगो र त्‍यसका परमपवित्र ज्‍वाला हुनुहुनेछ, र त्‍यसले त्‍यसका काँढ़ा र सिउँड़ीहरू एकै दिनमा जलाएर भस्‍म पार्नेछ।
18 त्‍यसका वन र मलिला खेतको शोभा सम्‍पूर्ण रीतिले भस्‍म हुनेछ। त्‍यो रोगले सुक्‍दैगएको मानिसझैँ हुनेछ।
19 त्‍यसका वनका बचेका रूखहरूचाहिँ यति थोरै हुनेछन्‌ कि एउटा बालकले पनि ती गनेर लेख्‍न सक्‍छ।
20 त्‍यो दिन इस्राएलका बचेको भाग, याकूबका घरानाका बाँचेकाहरूले फेरि आफूलाई प्रहार गर्नेमाथि भर पर्नेछैनन्‌, तर इस्राएलका परमपवित्र अर्थात्‌ परमप्रभुमाथि नै साँच्‍चै भर पर्नेछन्‌।
21 बचेका भाग, अर्थात्‌ याकूबको बचेको भाग शक्तिशाली परमेश्‍वरतर्फ फर्कनेछ।
22 हे इस्राएल, तिमीहरूका मानिसहरू समुद्रका बालुवाझैँ भए तापनि केवल एउटै बचेको भाग मात्र फर्कनेछ। सर्वनाश त प्रचुरता र धार्मिकतासित ठहराइएको छ।
23 परमप्रभु, सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुले सारा देशमाथि ठहराएअनुसारको सर्वनाश ल्‍याउनुहुनेछ।
24 यसैकारण परमप्रभु, सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभु यसो भन्‍नुहुन्‍छ, “हे सियोनमा बस्‍ने मेरा प्रजा हो, अश्‍शूरीहरूसित नडराओ, जसले तिमीहरूलाई एउटा लाठोले हिर्काए र मिश्रले गरेझैँ एउटा लौरो तिमीहरूका विरुद्धमा चलाए।
25 तिमीहरूको विरुद्धमा उठेको मेरो रीस चाँड़ै शान्‍त हुनेछ, र तिनीहरूका सर्वनाशको निम्‍ति मेरो क्रोध तिनीहरूतिर फर्कनेछ।”
26 सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुले ओरेबको चट्टानमा मिद्यानलाई हिर्काएर लड़ाएजस्‍तै तिनीहरूलाई एउटा कोर्राले पिट्‌नुहुनेछ। उहाँले मिश्रदेशमा उठाएझैँ आफ्‍नो लौरो पानीमाथि उठाउनुहुनेछ।
27 त्‍यो दिन तिनीहरूको बोझा तिमीहरूका काँधबाट, र तिनीहरूको जुवा तिमीहरूका घिच्राबाट उठाइनेछ, र तिमीहरू मोटाएको कारण जुवा भाँचिनेछ।
28 तिनीहरू अय्‍यातभित्र पस्‍छन्‌। तिनीहरू मिग्रोनबाट भएर जान्‍छन्‌। मिकमाशमा तिनीहरूले आफ्‍नो सामान सञ्‍चय गर्छन्‌।
29 तिनीहरू घाटीबाट भएर जान्‍छन्‌ र भन्‍छन्‌, “हामी गेबामा वास बस्‍नेछौं।” रामा थरथराउँछ, शाऊलको गिबा भाग्‍छ।
30 हे गल्‍लीमकी छोरी, आफ्‍नो उच्‍च सोरले करा! ए लैशा, ध्‍यान दिएर सुन्‌! बिचरा अनातोत!
31 मदमेना भगुवा भएको छ, गेबीमका मानिसहरू लुक्‍छन्‌।
32 आज नै नोबमा तिनीहरू अड़िनेछन्‌। सियोनकी छोरीको पर्वत, यरूशलेमको डाँड़ामा तिनीहरूले मुक्‍का देखाउनेछन्‌।
33 हेर, परमप्रभु, सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुले ठूलो शक्तिले स-साना हाँगाहरू लाछ्‌नुहुनेछ। त्‍यसका अल्‍गा-अल्‍गा रूखहरू ढालिनेछन्‌, र अल्‍गाहरू होच्‍याइनेछन्‌।
34 उहाँले वनका झाड़ीहरूलाई बन्‍चरोले काट्‌नुहुनेछ, र पराक्रमी जनको सामुन्‍ने लेबनान ढल्‍नेछ।
Isaiah9Choose Book & Chapter Isaiah 11